အသံတှကွေားနရေတယျ | OnDoctor
By Dr. Pyae Shin	 On Jul 27, 2018 Last updated Nov 9, 2019
အသံတွေ ကြားနေရတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ.?အမြင်အာရုံတွေ ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်နေရတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?တကယ်မရှိတာတွေ ရှိနေသလို ကြားနေရသလိုခံစားနေရသောဝေဒနာ။ထိုအရာထက်ပိုသော ကိစ္စရပ်များတောင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။တစုံတရာကို မရှိဘဲနဲ့ တွေ့ထိခံစားနေရသလို ဖြစ်ရပ်ဆန်းများလည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ အဆိုပါထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေတတ်သောအကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်။ စိတ်ရောအခြေအနေ ဥပမာschizophreniaကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို အာရုံကြောပြသနာဥပမာ Parkinson ရောဂါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သင်နှင့်သင်မိသားစုတွင်အဆိုပါ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ရပ်များကြုံတွေ့နေရပါက ဆရာဝန်နှင့်သေချာဆွေးနွေးကုသသင့်ပါတယ်။
သင်သည် မိမိစိတ်ထဲတွင် အသံများကြားနေရခြင်းသို့မဟုတ်အပြင်အသံများကြားနေရခြင်းအာရုံခံစားမူကို အသံကြောင့်ထင်ယောင်ထင်မှားမူဖြစ်ခြင်းဟု ပြောနိုင်ပါတယ်။တပါးသူပြောနေရသောစကားသံများကို မိမိကိုပြောနေသကဲ့သို့ခံစားနေရခြင်း ကြားနေရခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လက်တွေ့မရှိသောမဖြစ်ပွားသောကိစ္စရပ်များကို မြင်တွေ့နေရသည်ဟု ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် အနံ့များထူးခြားစွာအာရုံခံနိုင်ခြင်းစသည်ဖြင့် ထင်ယောင်ထင်မှားအနံ့ပေါင်းစုံခံစားနေရသလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင်အခြားသူများထိတွေ့ခံစားမူမရှိပဲ မိမိသာလျှင်ခံစားနိုင်သကဲ့သို့ထင်ယောင်ထင်မှား ထိတွေ့မူများလည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
-Schizophrenia ရောဂါခံစားနေရသော ၇၀%သောလူနာများသည်အမြင်အာရုံထင်ယောင်ထင်မှားမူကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီ ၆၀-၉၀%သည်အကြားအာရုံထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မူကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
-Parkinson’s ရောဂါခံစားသူတစ်ဝက်နီးပါးသည် လက်တွေ့မရှိသောဖြစ်ရပ်များကို မြင်နေရသည်ဟု ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
-Migraines လို့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကြောင့်လည်း အမြင်မာရုံဝေဝါးအထင်မှားမူကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
-ဦးနှောက်အကျိတ်များကြောင့်လည်း အကျိတ်နေရာပေါ်မူတည်ရ်ျ ထင်ယောင်ထင်မှားမူများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
-MRI သံလိုက်ဓာတ်ဖြင့်စစ်ဆေးခြင်း စသည်ဖြင့်ပြုလုပ်ရနါလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
-Schizophrenia နဲ့ Alzheimerရောဂါကြောင့်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဆေးဝါးဖြင့်ကုသခြင်း
အဆိုပါရောဂါကိုကုသရာတွင် အထွေထွေအထူးကုဆရာဝန်။ဦးနှောက်အာရုံကြောအထူးကုဆရာဝန်နှင့်ကိုယ်အင်္ဂါပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဆရာဝန်နှင့် ပူးပေါင်းကုသမူခံယူနိုင်ပါတယ်။
အသံတှေ ကွားနရေတယျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ.?အမွငျအာရုံတှေ ထငျရောငျထငျမှားဖွဈနရေတယျ ဘယျလိုလုပျရမလဲ?တကယျမရှိတာတှေ ရှိနသေလို ကွားနရေသလိုခံစားနရေသောဝဒေနာ။ထိုအရာထကျပိုသော ကိစ်စရပျမြားတောငျ ဖွဈနိုငျခရြှေိပါတယျ။တစုံတရာကို မရှိဘဲနဲ့ တှထေိ့ခံစားနရေသလို ဖွဈရပျဆနျးမြားလညျး ဖွဈနိုငျခရြှေိပါတယျ။ အဆိုပါထငျယောငျထငျမှားဖွဈနတေတျသောအကွောငျးရငျးမြားစှာရှိပါတယျ။ စိတျရောအခွအေနေ ဥပမာschizophreniaကွောငျ့ဖွဈနိုငျသလို အာရုံကွောပွသနာဥပမာ Parkinson ရောဂါကွောငျ့လညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။သငျနှငျ့သငျမိသားစုတှငျအဆိုပါ ထငျယောငျထငျမှားဖွဈရပျမြားကွုံတှနေ့ရေပါက ဆရာဝနျနှငျ့သခြောဆှေးနှေးကုသသငျ့ပါတယျ။
သငျသညျ မိမိစိတျထဲတှငျ အသံမြားကွားနရေခွငျးသို့မဟုတျအပွငျအသံမြားကွားနရေခွငျးအာရုံခံစားမူကို အသံကွောငျ့ထငျယောငျထငျမှားမူဖွဈခွငျးဟု ပွောနိုငျပါတယျ။တပါးသူပွောနရေသောစကားသံမြားကို မိမိကိုပွောနသေကဲ့သို့ခံစားနရေခွငျး ကွားနရေခွငျးဖွဈနိုငျပါတယျ။
လကျတှမေ့ရှိသောမဖွဈပှားသောကိစ်စရပျမြားကို မွငျတှနေ့ရေသညျဟု ထငျယောငျထငျမှားဖွဈနတေတျပါတယျ။
မိမိပတျဝနျးကငျြတှငျ အနံ့မြားထူးခွားစှာအာရုံခံနိုငျခွငျးစသညျဖွငျ့ ထငျယောငျထငျမှားအနံ့ပေါငျးစုံခံစားနရေသလိုဖွဈနိုငျပါတယျ။
မိမိပတျဝနျးကငျြတှငျအခွားသူမြားထိတှခေံ့စားမူမရှိပဲ မိမိသာလြှငျခံစားနိုငျသကဲ့သို့ထငျယောငျထငျမှား ထိတှမေူ့မြားလညျးဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
-Schizophrenia ရောဂါခံစားနရေသော ၇၀%သောလူနာမြားသညျအမွငျအာရုံထငျယောငျထငျမှားမူကိုဖွဈစနေိုငျပွီ ၆၀-၉၀%သညျအကွားအာရုံထငျယောငျထငျမှားဖွဈမူကို ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
-Parkinson’s ရောဂါခံစားသူတဈဝကျနီးပါးသညျ လကျတှမေ့ရှိသောဖွဈရပျမြားကို မွငျနရေသညျဟု ဖွဈလရှေိ့ပါတယျ။
-Migraines လို့ခေါငျးကိုကျဝဒေနာကွောငျ့လညျး အမွငျမာရုံဝဝေါးအထငျမှားမူကိုဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
-ဦးနှောကျအကြိတျမြားကွောငျ့လညျး အကြိတျနရောပျေါမူတညျရျြ ထငျယောငျထငျမှားမူမြားကိုဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
-MRI သံလိုကျဓာတျဖွငျ့စဈဆေးခွငျး စသညျဖွငျ့ပွုလုပျရနါလိုအပျနိုငျပါတယျ။
-Schizophrenia နဲ့ Alzheimerရောဂါကွောငျ့ဖွဈခဲ့လြှငျ ဆေးဝါးဖွငျ့ကုသခွငျး
အဆိုပါရောဂါကိုကုသရာတှငျ အထှထှေအေထူးကုဆရာဝနျ။ဦးနှောကျအာရုံကွောအထူးကုဆရာဝနျနှငျ့ကိုယျအင်ျဂါပွနျလညျသနျစှမျးရေးဆရာဝနျနှငျ့ ပူးပေါငျးကုသမူခံယူနိုငျပါတယျ။
ခေါငျးတဈခွမျး ခဏခဏကိုကျခွငျး (သို့ ) GCA